ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးပညာပေး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးပညာပေး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
Posted by online.hkk on Jun 20, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ရသည် ။
ဆရာဝန်(၂)ဦး ၊ သို့မဟုတ် ၊ (၃) ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး
View all posts by online.hkk →
ပထမဆုံးဆိုက်ထဲ စရေးတဲ့ ပို့စ်က ကော်ပီတဲ့လား ။
သဂျီးတို့ အိပ်ကောင်းနေတာနဲ့ …. ရွာသူ၊ ရွာသား အဟောင်းတွေ မပြောနဲ့ … အသစ်တွေ တောင် မဖြုံဘူးတဲ့ …. ။
ဒါပါပဲ အမည်ခံ သူကြီး၊ ရွှေရည်စိမ် စည်းကမ်းပေါ့ဗျာ။
ဘယ်ကော်ပီ အားပေး ဟိုဟာတွေက ငါ့ကို dislike လာလုပ်တာလဲ … ။ လုပ်ချင်တာလုပ် ဂရုမစိုက်ဘူး … မှန်တာပြောတော့လည်း နာတတ်လိုက်တာ ။ အပြောမခံချင်ရင် မလုပ်နဲ့လေ … ။
ရွှေရည်စိမ် စည်းကမ်း မဟုတ်ပါ မှန်ဘောင် စည်းကမ်းပါ။
မန်းဂေဇက် ကို အချဉ် web site လို သဘောထား ပြီး လုပ်သမျှ ဖြစ်တယ် လို့ ထင်နေလို့ နေမှာပါ ဗျာ ။
ကော်ပီ ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ရေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ မူလ စတင် ရေးသားသူ ကို အမည်ဖော်ပေးသင့်တာပေါ့နော်။ဒါမှ မဟုတ် ကိုးကားချက် ထည့်သင့်ပါတယ်။
ကြက်မကြီးဝက်ကြီးဌာနရဲ့ ပညာပေးစာတွေဆိုရင် ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျ၊ ခေါင်းစဉ်မှာ ပြောပြီးသားလေ။ သို့တည်းမဟုတ် ဆရာဝံတအူးအူးရဲ့ ဆိုက်က ကူးယူဖော်ပြတာဆိုရင်တော့ သတ်စေဗျား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မူရင်းလင့်ခ်၊ ဆို့စ်လေးတော့ ပေးတာမမှားပါဘူး…..
ကျနော်လည်း အများပြည်သူအတွက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကားကွယ်ရေးဝက်ကြီးဌာနရဲ့ ပညာပေးတခုကို အမြည်းသဘောမျိုး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင်ဝါဒီများအား ဆန့်ကျင်ကြ
credit – ကြေမှုန့်သတင်းစာ
@online.hkk : Are you sure that it is from Health Education from Ministry of Health (MOH)? I doubted. In your post, there are many misconception and wrong information which is harmful to the public and some are misleading. If it is notagenuine information from MOH, you should not mention such as.
(1) You mentioned that အသည်းနဲ့ကလီစာများသည် လုပ်ဆောင်မှုတူသည့်အပြင်ဆက်စပ်နေကြသည် ။ ထို့ကြောင့် အသည်းတွင် တစ်ခုခုဖြစ်ပါက ကလီစာများတွင်လည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည် ။ ကလီစာတွင် တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် အသည်းတွင်လည်းထိခိုက်နိုင်သည် ။ What is ကလီစာ exactly? Viscera? Kidneys? Spleen? Very vague and not informative.
(2) အသည်းကို သေသေချာချာဂရုစိုက်ပါက ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပေသည် ။ There is no scientific proof for that. Misleading!
(3) တရုတ် လူမျိုး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသည်းမကောင်းကြပါ ။ Where is the statistical data? Do you think MOH, Myanmar will quote Chinese data instead of Myanmar data? If so, is it rational?
(4) အသည်းသည် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အလုပ်လုပ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၄င်းကိုယ်တိုင်လည်း ဆားဗစ်စင် ပြန်လုပ်ရသည် ။ ထိုအချိန်သည် ၊ ည (၁၁) နာရီမှ မနက်စောစော (၃) နာရီ ကြားတွင် ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ည (၁၁) နာရီနောက်ပိုင်းမှ အိပ်ခြင်း ၊ ညစာကို နောက်ကျမှ စားခြင်းသည် အသည်းကိုအားနည်းစေသည် ။ Any scientific proof? Please refer to Physiology.
(5) အင်္ဂလိပ်ဆေးဝါးများသည် ဓါတုနည်းနှင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့်
မုန်လာဥဖြူက တရုတ်ဆေးတွင် ပါဝင်သော ဆေးစွမ်းကို ဖျက်ဆီးသည် ။ How can you say it is from MOH? Is MOH against western medicine? No way!
(6) မိန်းမများသည် ပို၍ အသက်ရှည်ကြသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်မိန်းမတို့ သဘာဝ ရာသီသွေးလာခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အညစ်အကြေးနှင့်ဒေါသကို မှန်မှန် စွန့်ထုတ်၍ စိတ်ဓါတ်ကို ပို၍ တည်ငြိမ်စေသည် ။ Menstruation is normal physiology. It is not အညစ်အကြေးနှင့်ဒေါသကို စွန့်ထုတ်ခြင်း ။
(7) မလိုအပ်ဘဲ အိပ်စရေး (X-ray) ရိုက်ခြင်း (C.T. Scan )လုပ်ခြင်းတို့ကို မလုပ်ပါနှင့် ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိခိုက်စေပါသည် ။ It is not true. Dosage of radiation is carefully calculated and Imaging hasaminimal or negligible risk as compared to its benefits.
(8) နှစ်စဉ်ပုံမှန် ဆေးစစ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် တခြားရောဂါများကို မသိနိုင်ပါ It is againawrong information. Regular check up and health screening can detect some cancer and many diseases early and ensure early treatment. It is Preventive Medicine.
Above facts are some of wrong information in your post which can mislead the public. If you postapost, you are responsible for it even though it is copied and pasted from other sites. Please do not mislead the public by your wrong and evidence-lack information. Sometimes, intention to savealife can kill many lives when wrong information is given. I apologise the readers for my long comment for I do not want the public misled by wrong and anecdoctal information. Thank you.
ဒီလို စိစစ်ဝေဖန်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကြည့်ရတာ..စာမူရင်းက.. ဘယ်အီးမေးလ်ဖေါ်ဝပ်ကနေကူးတင်တယ်မသိပါဘူး..။ အများအားဖြင့် Hoax (အာရွှီး)တွေမို့ .. စိစစ်ဝေဖန်တာတွေရှိမှ.. ဖြစ်မှာပါ..။
ဒီလို စိစစ်ဝေဖန်ပေးတာကို.. အပြစ်တင်တယ်လို့တော့ လုံးဝမပြောသင့်ပါဘူး..။
လူတွေကိုသတင်းအမှားတွေပေးတာမျိုးကိုသာ.. ၀ိုင်းရှုံ့ ချသင့်တာပါ..။ ဆေးပညာပိုင်းဖြစ်တာမို့ .. လူတွေအသက်တွေနဲ့ရင်းထားရတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်.။
အင်း သဒ္ဓါဖြူဆိုတဲ့ အသစ်လည်း ဒုက္ခပဲ ..ပထမဆုံးဆိုက်ထဲဝင်မန်းတဲ့အခါ … အလိုမကျမှူတွေနဲ့ ပထမဆုံး comment ကို စတင်လိုက်တာပါလား … ။
ဒီဆိုက်အထာကို မနပ်သေးပဲ … အပြစ်တင်စောနေလျှင်တော့ သူများ အမြင်ကတ်မှာ အမှန်ပဲ ။
မြန်မာ နိုင်ငံက လူတွေလို့ သုံးနှုန်းလိုက်တာ မင်းကရော ဘယ်တိုင်းပြည်ကို ရောက်နေလို့လဲ … ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲ ရောက်ရောက် မင်းလည်း မြန်မာပြည်မှာ မွေးတာပါပဲ … ။ ဘ၀င်လေဟပ် သွေးနားထင်ရောက်မနေနဲ့ ….. ။ မင်းကိုယ်ထဲမှာ စီးနေတဲ့ သွေးတွေ စတင်ခဲ့တာ မြန်မာ နိုင်ငကပဲ … ။ ဘ၀မမေ့ချင်စမ်းပါနဲ့ …. ။
ငါတို့ ရဲ့ အလုပ်ချိန်လေးနဲ့ လုပြီး ဖတ်နေရတဲ့ ဆိုက်မှာ စာပါရင်ပြီးရော ကူးလာတဲ့ပို့စ်တွေ များလာလွန်းလို့ အရည်သွေးကျလာတယ် … ။ ဖတ်ရတဲ့လူတွေ အချိန်အားလုံးဖြုန်းနေတာမဟုတ်ဘူး … အဖန်တရာကြေအောင် အီးမေးလ်းထဲ ၀င်နေတဲ့ အကြောင်းရာတွေ ပြန်ကူးနေတာ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်လှပြီ ။ အချိုးမကျလို့ ၀ိုင်းပြောတာ အပြစ်တင်တယ်ထင်ချင်ထင် ၊ ပြောတာ နာတတ်လျှင် မလုပ်နဲ့ ပေါ့ … ။
ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး စကားကျယ်တွေ ၀င်မပြောနဲ့ …. မင်းကရော ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ … နှုတ်သီးကောင်းလို့ လာစွာတာပဲရှိတယ်… ။ စကားပဲပြောတတ်တယ်မို့လား တိုင်းပြည် အတိုင်းတာနဲ့ မပြောပဲ … ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်တောင် ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်ကြည့်ပါဦး ။
တခုခုဆို အပြစ် တင်မယ် ဆိုတဲ့ စကား လွယ်လွယ် မသုံးပါနဲ့..
ဘေးမှာ ထင်သာ မြင်သာအောင် ရေးထားတဲ့ စည်းကမ်းရှိတယ်။
မြန်မာစာ ဒီလောက် ရေးတတ်မှတော့ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ဖတ်တတ်မယ် ထင်တယ်။
မတိုးတက် စေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ရှိလို့ မတိုးတက်သေးတာ အမှန်ပါပဲ။
တိုးတက်ချင်တဲ့ လူတစုရဲ့ စည်းကမ်းအပေါ်လိုက်နာတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အမှန် အမှား ထောက်ပြမှု မလိုက်နာ ၀န်ခံရဲ လိုက်မလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့် မတိုးတက်ရတာပါ။
စည်းကမ်းကို လိုက်နာ ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ လူတွေကြောင့် မတိုးတက်တာ.. သူများ အပြစ်မမြင်ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုသာ ကောင်းအောင် လုပ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မနောလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကောင်းအောင်၊ တိုးတက်အောင် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားနေတုန်းပါရှင်။ ဆက်လက်ပြုပြင်သွားပါမယ်….